Zanu PF Inoparura Musangano Wayo kuBulawayo
Zvita 08, 2011
Mutungamiri wenyika, uye vari mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, vavhura zviri pamutemo musangano webato ravo wepagore uyo uri kuitirwa kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo.
VaMugabe vati chirongwa chekuendesa hupfumi kuvatema hachisi kuzodzokera kumashure uye vashora nyika dzekumadokero dziri pasi pemubatanidzwa weNATO nekubvisa kwadzakaita vaimbova mutungamiri weLibya, mushakabvu Muammor Gaddaf pachigaro.
VaMugabe vashorawo VaGaddaf vachiti havana chavakaitira Africa munyaya dzezvehupfumi nekuti vaikoshesa kudyidzana nevarungu..
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, uye vari chipangamazano musangano reCrisis In Zimbabwe Coalition, VaDewa Mavhinga, vanoti hurongwa hweZanu PF hwekutsvaga rutsigiro ichishandisa chirongwa chekuendeswa kweupfumi kuvatema hahushande, sezvo izvi zvakaramba panguva yekutorwa kweminda.
Zvichakadaro, musangano weZanu PF waparurwa zviri pamutemo kuBulawayo paine tarisiro yekuti pauchapera bato iri richabuda nezvisungo panyaya dzekuendeswa kweupfumi kuvatema pamwe nesarudzo.
Zanu PF iri kuda kuti sarudzo idzi dziitwe ore rionuya.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe, vanoti havaoni zviri kudiwa neZanu PF zvekuti sarudzo dziitwe gore rinouya zvichibudirira sezvo pachine zvakawanda zvisati zvazadziswa muhwaro hwesarudzo.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari kumusangano weZanu PF uyu, VaIsrael Dzikira, vanoti musangano uyu watanga zvakanaka chose uye dingindira remusangano uyu inyaya yekuendeswa kweupfumi kuvatema pamwe nekuchengetedzwa kwahwo.
Hurukuro naProfessor John Makumbe pamwe naVaIsrael Dzikira